किन नेपालका सबै हलमा रिलिज भएन हिन्दी फिल्म ‘संजू’ ?
काठमाडौँ । सधैँझै आज शुक्रबार चलचित्र हलहरुमा नयाँ फिल्म रिलीज हुने दिन । नेपालका सबैजसो हलहरुमा आज नयाँ चलचित्र भित्रिने दिन । तर नेपाली दर्शकहरुको व्यग्र प्रतिक्षा रहेको हिन्दी चलचित्र ‘संजू’ यो शुक्रबार सबै हलहरुमा भित्रिन सकेन ।
जब यी अभिनेत्रीहरुले त्यस्ता दर्दनाक दिनहरु देखे
रिल लाइफमा अभिनेत्रीहरुसँग बलात्कार भएका धेरै घटनाहरु देखाइन्छन् । तर केही अभिनेत्रीहरु भने रियल लाइफमा नै बलात्कारको सिकार भएका छन् ।
गन्तव्य नेपालको तेस्रो गीति एल्वम ‘पर्यटनमै भविष्य’ बजारमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गन्तव्य नेपाल ग्रुपले तेस्रोे गीति एल्बम बजारमा ल्याएको छ । संगीतको माध्यमबाट मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सदाबाहर गीति एल्बम ‘पर्यटनमै भविष्य’ बजारमा ल्याएको हो ।
फिल्म ‘संजु’ मा देख्न सकिन्छ संजय दत्तका जीन्दगीका यी ६ कहानी
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता संजय दत्तको जीवनमा आधारित फिल्म ‘संजु’ आउँदो शुक्रबार रिलीज हुने तयारीमा रहेको छ । बायोपिक फिल्म ‘संजु’ मा अभिनेता रणबीर कपूरले मूख्य भूमिका निभाएका छन् अर्थात उनले संजय दत्तको भूमिका निभाएका छन् ।
आफ्नै नोकरानीसँग सम्बन्ध बनाएका बलिउड कलाकार
बलिउडमा केही यस्ता कलाकारहरु रहेका छन् जो आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकरानीसँग यौन सम्बन्ध बनाएकै कारण चर्चामा रहे ।
यी १० कलाकारहरुको लागि अन्तिम सावित भए यी फिल्म, रिलिज पहिले नै भयो मृत्यु
आर्यन सिग्देलले साहित्यकार सुविन भट्टराईको स्टयाटस चोरेपछि...
काठमाडौँ । साहित्यकार सुविन भट्टराईले अभिनेता आर्यन सिग्देलले चलचित्र ‘कायरा’मा आफ्नो ‘स्टयाटस’ हुबहु चोरेको आरोप लगाएका छन् । चलचित्र ‘कायरा’ को निर्माता समेत रहेका सिग्देलले ट्रेलरमा बोलेको एउटा संवाद आफ्नो फेसबुकबाट चोरेकोप्रति भट्टराईले आपत्ति जनाएका हुन् ।
चलचित्र ‘बुलबुल’मा अभिनेत्री स्वस्तिमा ट्याम्पो चालक
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र ‘बुलबुल’ मा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का ट्याम्पो चालकको भूमिकामा देखिने भएकी छिन् । सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रको घोषणा गरिएको हो ।
किन घर छोड्ने फैसला गरे अभिषेक र ऐश्वर्याले ? एक्लै भए अमिताभ र जया
एजेन्सी । बलिउड सुपरस्टार तथा बलिउड उद्योगमा ‘बिग बी’ उपनामले आफ्नौ छुट्टै पहिचान बनाउन सफल अमिताभ बच्चनको छोरा बुहारी अर्थात बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री ऐश्वर्या र अभिनेता अभिषेकले छुट्टिएर एक्लै बस्ने निर्णय गरेका छन् ।